Nezvedu - Wuxi Tricera Trading Co., Ltd.
Wuxi Tricera Trading Co, Ltd. ("Trimill" izita redu rechiratidzo) indasitiri inosanganiswa
uye vezvokutengeserana zvebhizimisi pamwe 20years of nyanzvi ruzivo muna maufacturing mukuyi uye mukuyi makirisito nenhumbi.
Nhamba yevashandi veR & D
Wuxi Tricera Trading Co Ltd. ("Trimill" izita redu rechiratidzo) iri indasitiri yakasanganiswa uye yekutengeserana bhizinesi ine makumi maviri emakore ehunyanzvi ruzivo mukugadzira grinder uye mukuyi wepakati zvishongedzo. Kubva pane simba rakasimba repfekitori yedu-Wuxi Dahua Fine Ceramic Co, Ltd. fekitori yakavambwa muna 2001, iri muWuxi, kumahombekombe eTaihu Lake yakanaka, makiromita zana chete kubva kuShanghai. Iyo yekambani yekugadzira nzvimbo inopfuura 6000 mativi emamirimita, hofisi nzvimbo ingangoita 1800 mativi emamita. Iyo kambani ine yakanakisa timu yevanoda kusvika zana vanhu, kusanganisira vanopfuura gumi zvinhu zvemaneja maneja, 3 epakati nepakati mainjiniya emhando mune yedu manejimendi timu timu.Our kambani inogadzira kugadzirwa kwe ceramic grinder nezvimwe zvigadzirwa zvine hukama, zvinobuda pagore zvinowana 5 mamilioni seti uye ine seti yakazara yeanogadzira mitsara uye epamberi yekuyedza michina.
Unyanzvi Hwenyanzvi Hwevhisi
Chiitiko chakakura cheDAHUA chine budiriro, kugadzirwa uye kushandiswa kwemaindasitiri keramiki. Kune iwe izvi zvinoreva kuchengetedzeka, kuvimbika uye nzwisisika yekubvunza sevhisi.
Zvayo Nzvimbo Dzemagadzirirwo
DAHUA ine nzvimbo dzeboka-dzinogadzira nzvimbo uye nekudaro ine pesvedzero yakaenzana pamaitiro ekugadzira. Izvi zvinoreva kukuru kuchinjika uye garandi yekupa kwauri.
Yedu akasiyana-siyana ekushambadzira masevhisi anogona kupa iyo inokurumidza uye inonyanya kufadza zvinhu zvekutakurirwa kwevatengi vepasirese. Kusangana nezvinodiwa nevatengi zvekushandisa zvakanaka, zviri nyore uye zvakachengeteka uye kurongeka kwekugadzirisa. Hazvina mhosva kuti vatengi vako varipi, chero izvo zvaunoda zvinogona kuwanikwa kuburikidza neyedu yakasimba logistics network.
Dahua inopfuura yazvino ISO9001 yemhando system chitupa uye yegore yekutevera-yekuongorora. Iyo kambani inonyatso kudzora nharaunda, zvishandiso uye zvigadzirwa zvinoenderana nezvinodiwa zvechitupa. Zvese zvemhando yekuongorora uye zvekushandisa kudzora zvekambani zvinoenderana nezvinodiwa zvemunyika dzese.
Kambani yedu yawana iyo ISO 9 0 0 1: 2 0 1 5 yemhando system chitupa, uye zvigadzirwa zvakapasa kuyedzwa kwechikafu chekubata chinodiwa neTUV SGS yekuyedza masangano. Izvo zvigadzirwa zvinosangana nezvinodiwa neROHS, FDA, EU LFGB nedzimwe nyika dzakawanda.Zvigadzirwa zvedu zvinotumirwa zvakananga kuUSA, Japan, South Korea, Germany, Austria, Singapore nedzimwe nyika. Kuenderera mberi kwehunyanzvi ndicho chinangwa chedu chekusingaperi. Isu tine yakasimba chigadzirwa dhizaini kugona uye takawana akawanda patents mune chigadzirwa chimiro uye pfungwa. Mumakore achangopfuura, kambani yedu yakabudirira kugadzira akateedzana ezvigadzirwa zvitsva, zvinosanganisira yemagetsi munyu uye pepper grinder, bhuku remunyu uye pepper grinder, yemagetsi kofi grinder, bhuku rekofi gridner, Zvivakwa zveCeramic nezvimwe kugutsikana kwevatengi ibasa redu, basa redu rinofanirwa kuve zvasvika, tinotarisira kushandira pamwe newe!
Tine nzvimbo dzekugadzira-dzeboka uye nekudaro dzine hunyanzvi pane zvigadzirwa. Izvi zvinoreva kukuru kuchinjika uye garandi yekupa kwauri.
Vatengi vedu hombe vatengi ndeaya: Japan KYOCERA, Japan HAIRO, England DYSON, China JOYOUNG, nezvimwe.
Chigadzirwa chakanaka, tichitarisira kutevera hukuru hwekudyidzana!
Chigadzirwa sekutsanangurwa, mhando sekutarisirwa.
Yenguva refu-mudiwa muChina, nyanzvi uye yakanaka! Kugutsikana!